भन्छिन , मेरो जिउडाल धेरै सिलिम भयो त के गर्ने ? – रेखा थापा – Hamro24News
भन्छिन , मेरो जिउडाल धेरै सिलिम भयो त के गर्ने ? – रेखा थापा
July 16, 2021 adminLeaveaComment on भन्छिन , मेरो जिउडाल धेरै सिलिम भयो त के गर्ने ? – रेखा थापा
काठमाडौं :- एउटा ‘चल्ती’ की हिरोइनको यस्तो कथा सुर दि’क्दार लाग्यो रेखालाई। पी’डाले थप गाँ’ज्यो भने अझै दुःख’दायी अवस्था सामना गर्नुपर्ला भनेर उनले सुरक्षित अवतरणको बाटो देखाइदिइन् तिनलाई। तर, अहिले एउटा प्रतिभालाई संघर्ष गर्न पलायनको बाटो देखाएकोमा भने पछुतो लागेको छ उनलाई।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
‘दिपिकाको कथा सुनिसकेपछि तिनलाई म’नोवि’ज्ञको परामर्श लि नसुझाएकोमा भने ग्ला’नि महसुस भइरहेको छ,’ रेखाले सुनाइन्।दिपिकाका व्यवहार क्रमशः अनौठा हुँदै गएका थिए। बिहान उठ्नेबित्तिकै बिनाकारण रि’स उ’ठ्थ्यो उनलाई। काममा पटक्कै मन लाग्दैनथ्यो। मान्छेसँग बोल्नै नपरोस्जस्तो हुन्थ्यो। यो अवस्थाबारे भनेकी थिइनन्। परिवारले त केही थाहा नपाओस् भन्ने नै चाहन्थिन्।
राम्रो जिउडाल, बेहद चर्चा, बैंक ब्यालेन्स… विलासी जीवनशैली। काम, नाम र दामले मा’लामा’ल करिअर। ‘नम्बर वान’ को दौडमा झन्डै सबैलाई उछिनिसकेकी बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोणसँग के थिएन? एक वर्षअघि फिल्म ‘ह्या’पी न्यु इयर’ को क्लाइमेक्स सुटिङ हुँदै गर्दा दिपिकाको सफलताले सगरमाथा चुम्दै थियो।
दुनियाँका आँखामा अति , व्यस्त र नि’ष्फिक्री यी सुन्दरी भित्रभित्रै जल्दै थिइन् र आफैंसँग पराजित अनुभूति साच्दैउनले तुरुन्तै मनोविज्ञको परामर्श लिइन् र औ’ष’धि पनि। आफू दु’रुस्त भएपछि दिपिकाले आफ्नो स’मस्या र उपचारकथा सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गरिन्।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
किनकि, उनलाई आँकलन थियो– यो रं’गिन दुनियाँका थुप्रै अनुहार यस्तै स’मस्याले म’लिन हुँदै गइरहेका छन्। थिइन्। उनलाई किन यस्तो भइरहेको छ, बाहिरी दुनियाँले मात्र होइन, स्वयंलाई समेत कुनै भेउ थिएन।दिपिकालाई कुन अवस्थाले डि’प्रेस’नमा पुर्‍यायो होला? यस्तो सोच्दासोच्दै उनलाई ती सहकर्मीका सामुन्ने पुर्याइयो, जो केही समयअघि उनीसित पो’खि’एकी थिइन्।
ठ्याक्कै दिपिकाकै जस्तो अनुभूति र त्यसपछाडिका भयावह पी’डा बिसाएकी थिइन् ती अभिनेत्रीले रेखालाई, नजिककी सहयात्री सम्झेर। ती अभिनेत्रीले फिल्म क्षेत्रका सबैखाले शो’षण स’हेकी थिइन् जुन बजारु चर्चामा आइरहन्छन्। डि’प्रेस’नले स’किन लागेकी ती सहकर्मीको अवस्था, आँसु र बि’लौनाका स्वरसहितको अनुहार रेखाका आँखामा निकैबेर घुमिरहे। रेखा ती अभिनेत्रीको हा’लत सुनाउँदै गइन्–भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्
पुजाको अर्को वर्ष बिहे ? भन्छिन् ‘जिवनमा कोहि आएको छ, तर त्यो आकाश होइन’
अबको चुनावमा हाम्रो स्पष्ट बहुमत आउँछः अध्यक्ष ओली
सरकारी कर्मचारीको तलब-भत्ता फेरि बढ्ने भयो भन्दै एका बिहानै सरकारले दियो यस्तो खुशीको खबर !
भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा पूजा गरिने स्वर्ण कछुवा नेपालमा भेटियो ॐ लेखि सेयर गरौं
धेरै विकृति आएको भनेर गुनोसो आएपछि साउन १ गतेबाट नेपालमा टिकटक एकाउन्ट ब’न्द हुदैँ ! ठिक कि बेठिक?